I-Alto das Nogueiras House Fátima - I-Airbnb
I-Alto das Nogueiras House Fátima
Fátima, Santarém, i-Portugal
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Célia E Jaime
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Jan 3.
Ifulethi litholakala e-"Alto das Nogueiras" e-Fátima. Lena ibhekwa njengendawo engcono kakhulu yokuhlala e-Fátima. Futhi iqhele ngamamitha angama-700 ukusuka endaweni engcwele yase-Fátima. Kukuthatha imizuzu engu-8 ngezinyawo ukuze ufike lapho.
Yifulethi elisha sha futhi lihlome ngokuphelele. Ikhishi linempahla eminingi efana ne-cooker, ifriji, ama-microwaves nohhavini. Kukhona uxhumano lwe-WiFi kanye ne-TV ye-4K, futhi. Leli fulethi lilungele ukuphumula, ukuphumula noma ukuhlangana nesifunda. Ilungele imindeni, abangani noma uhambo lwebhizinisi.
umbhede oyidabulu engu- 1, 2 osofa, imibhede yomoya engu- 1
ubusuku obungu-7 e- Fátima
Ifulethi lisendaweni ethule nephephile. Izungezwe izindawo zokuthengisa ezimbalwa njengezindawo zokudlela, amathilomu, amabhikawozi, ama-greengrocer, ikhemistri, ilondolo kanye nenkundla yokudlala. Kukhona nemakethe yendabuko eduze.
Ibungazwe ngu-Célia E Jaime
Inombolo yepholisi: 72561/AL
Hlola ezinye izinketho ezise- Fátima namaphethelo